ပင်တိုင်ကဏ္ဍ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 706
Tu Maung Nyo – Don’t take President word seriously …
ဦးသိန်းစိန်၏ ရေဒီယိုစကား မုသား – မယုံလေနဲ့သတိထား တူမောင်ညို (၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်) သမ္မတ (ဗိုလ်)ဦးသိန်းစိန်ကို ဆူပါမီဒီယာကြီး(CNN) က (Icon of Reform) လို့ သမုတ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ပြည်သူပြည်သားများကလည်း အားကျမခံ သမ္မတကြီးကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ (Icon of Lie) လို့ အနွတ္တသညာပြု လိုက်ရပါတယ်။ “နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမရှိ” လို့ ဗြောင်လိမ်ရာကနေ၊ “ရာဇဝတ်မှုနဲ့ နိုင်ငံရေးပြစ်မှု မကွဲပြား” တာပါလို့ ပတ်ပြီးလိမ်ညာလာပြန် ပါတယ်။ “နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား” အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုဖို့အရေး (ဗိုလ်) ဦးသိန်းစိန်ကြံ့ဖွံ့အစိုးရမှာ ခက်ခဲလှပါဘိတော့တယ်။ အမေရိကန် သမ္မတအိုဘားမားဖိအား တယ်လည်းကြီးမားလှပါကလား။ – မသေချာမရေရာမှုတွေက များပြား စိန်ခေါ်မှုတွေကလည်း...
မေတ္တာရှင်ပရဟိတ စံပြဆုရှင်များ (သို့) လောဘသုံးမျိုးကို စွန့်ရဲသူများ ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) ဇွန် ၄၊ ၂၀၁၃ ၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော် (၅) ရက်၊ ၂၉.၅.၂ဝ၁၃ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်း၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ မရမ်းချောင်းကျေးရွာ “မေတ္တာပရဟိတဂေဟာ” ၌ အ.ထ.က ကျောင်းခွဲ၊ မေတ္တာပန်း နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်သစ် လွှဲပြောင်းရေစက်ချအခမ်းအနားနှင့် အရှင်ဇဝန ဓမ္မကထိက ဗဟုဇနဟိတဓရ (မေတ္တာရှင်ရွှေပြည်သာ) မှချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုသည့် “မေတ္တာရှင်ပရဟိတ စံပြဆု” ပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနားအား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အခမ်းအနားအား နံနက် (၉းဝဝ) နာရီအချိန်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး မေတ္တာရှင်ပရဟိတ စံပြဆုရှင် (၁ဝ) ဦးတို့အား မေတ္တာရှင်ဆရာတော်မှ ရွေးချယ်ဂုဏ်ပြုခဲ့ရာ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူ၊ ဒု-ဥက္ကဌ ဒေါ်သန်းမြင့်အောင်...
‘အထက်’ ကတဲ့လား …. ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း) ဇွန် ၅၊ ၂၀၁၃ ကျွန်တော်တို့ ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ၏ အများပြည်သူ လူထုတို့အပေါ် ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါး လက်ကိုင်ပြုပြီး သီလလုံခြုံစွာဖြင့် အနစ်နာခံ ပေးဆပ်မှု စေတနာတရားများအား ဟန့်တားခြင်း၊ ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ တားမြစ်ခြင်း စသည့် အကုသိုလ်လုပ်ရပ်များကို ယခင့်ယခင် အစိုးရလက်ထက် များ ကတည်းက တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော်တို့ ပရဟိတသမားများသည် နိုင်ငံရေးပါတီ ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ထားသော နိုင်ငံရေးသမားများမဟုတ်၊ နိုင်ငံ့အရေး ပြည်သူ့အရေးကိစ္စများကို အစိုးရအား အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့် တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ ပံ့ပိုးကူညီပေးနေသော စေတနာရှင်များ သက်သက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတော်အား ဆူပူမှုကို လှုံ့ဆော်ကြသူများမဟုတ်၊ နိုင်ငံတော်အာဏာအား လိုချင်တက် မက်ကြသောသူများလည်းမဟုတ်။ ပြည်သူလူထုတို့အားလည်း စည်းရုံးရေးဆင်းရန်မလို၊ ကိုယ့်အလုပ်...
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ခရိုနီ၊ မိုနိုပိုလီနဲ့ ဒီမိုကရေစီ … မြန်မာပြည် ဇွန် ၅၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်းစောငို – လွှတ်တော်မှာ ငွေပေါ်မယ် .. ဇွန် ၅၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနှင့် ဖက်ဒရယ်ပြသနာ မောင်ဝံသ ဇွန် ၄၊ ၂၀၁၃ ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ် ၀၆ ၀၆ ၂၀၁၃ပါ မောင်ဝံသ ပြောချင်လွန်းလို့ဆောင်းပါး။ ၁၉၄၈ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့ တောတွင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအပြင် ၁၉၆၂ခုနှစ် နောက်ပိုင်း ထပ်မံပေါ်ထွက်လာတဲ့လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ သစ်တွေပါ ပါဝင်ဆင်နွှဲလာခဲ့ကြတဲ့ လွတ်လပ်ရေးရဲ့ ဖွားဖက်တော် ပြည်တွင်းစစ်ကြီးဟာ ယနေ့အထိ မပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း စစ်အစိုးရခေတ်မှာ လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၁၇ ဖွဲ့နဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်တွေ ရခဲ့ပေမယ့် အင်အားကြီးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကေအင်ယူနဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေခဲ့သလို ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကနေ ပေါ်ထွက်လာတဲ့ သမတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာလည်း ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် အရှိန်အဟုန် မြှင့် လုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ အစိုးရက ပြောနေတဲ့ကြား က အစောပိုင်း ကချင် ပြည်နယ်မှာ၊...
ဒ ဂု န် တာရာေ နွ ဦး( ၄ )အောင်ဝေးဇွန် ၄၊ ၂၀၁၃ နိုင်မွန်အောင်သွင်ရေ … ဆစ်ဒနီမှာ ဖြစ်တည်ရဲ့လား။ ကလော- အောင်ပန်း ဒဂုန်တာရာလမ်းကလေး လွမ်းနေပြီလား။ ဒီအချိန်ဆို မှိုင်းလုံးတောင်ထိပ်မှာ မိုးရိပ်တွေ ဆင်နေရော့ မယ်။ ဘ၀ကို မကျေနပ်တိုင်း ကဗျာရိုင်းရိုင်းဖွဲ့ မုန်တိုင်းကို လွှဲသိပ်ခဲ့တဲ့ရက်တွေ။ “အချစ်ရေ … မြေနဲ့ ကောင်းကင်၊ မြင်နေသမျှ အလှခေတ်ဦး ဖူးသစ်လာမှာ ပါပဲကွယ်၊ ယုံပါ” (မောင်လေးအောင်)...
ကာတွန်းစောငို – ခေတ်မီတိုးတက်သော “တော်သစ်ကြီးနဲ့ ချက်ကြီးပေါ်လစီ” မြန်မာပြည် ဇွန် ၄၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ဂန္တ၀င်စာဆိုတော်ကြီးများ (ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ) သန်းဝင်းလှိုင် ဇွန် ၄၊ ၂၀၁၃ ပြည်မြို့ ရွှေဘုန်းပွင့်စာကြည့်တိုက်နှင့် ယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်အသင်းက ကြီးမှူး၍ အင်းဝခေတ်စာဆိုကျော် ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ (မြန်မာ ၈၃၀ – ၈၉၂) အား အမှတ်တရပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားနှင့် ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ အထိမ်းအမှတ် မော်ကွန်းတင်ကျောက်စာတိုင်အား ကျောက်စာကပ်ခြင်းနှင့် မွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်း အခမ်းအနားကို ပဲခူးတိုင်း ပြည်မြို့ရှိ ရွှေမောင်းတုန်း တောရကျောင်းတိုက်တွင် ပြီးခဲ့သော ၂၀၀၇ ခု၊ မေလ (၂၇) ရက်နေ့ နံနက် (၈) နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ လေသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနား၌ ပြည်မြို့ ရွှေဘုန်းပွင့်စာကြည့်တိုက်အမှုဆောင် ဦးကျော်ဒင်ဟန်က ကျောက်စာတိုင် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပုံ သမိုင်းကြောင်းနှင့် သတင်းထောက် ဦးမြရွှေ၊ ပြည်မြို့စာပေနှင့် စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်မောင်တို့က ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ၏ ထေရုပတ္တိအကျဉ်းနှင့်...
Page 706 of 849«1...704705706707708...849»